မြေပြို ၊ ရေကြီး ဒုက္ခတောထဲမှာ ထမင်းတစ်ထုပ် (၂)ထောင်ပေး ဝယ်စားနေရတဲ့ ရင်နာစရာ ဒုက္ခသည်တို့ ရဲ့ ဘဝ ⋆ The Ginger Media
မြန်မာပြည်ရဲ့ တနသာင်္ရီတိုင်းနဲ့ မွန်ပြည်နယ်မှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ရေကြီး၊ရေလျှံ၊ ရေမြုပ်တဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေရပြီး ရေးမြို့မှာဆိုရင် မြို့ရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိဟာ
ရေအောက်ရောက်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ နေ့စဉ်လို သတင်းတွေကြားသိနေရတာဟာ အင်မတန်ဝမ်းနည်းစိတ်ထိဖွယ်ရာကောင်းလှပါတယ်။ ရက်ပေါင်းဆက်တိုက် မိုးကြီးသည်းထန်ခဲပြီးတဲ့နောက်မှာ
အခုလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကို မြန်မာပြည်သူတွေ ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေသေကြေပျက်စီးနေဆဲဖြစ်သလို အခုချိန်ထိ ဒုက္ခတောထဲကမလွတ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။
ဒါဟာ ရင်နာစရာသိပ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကို နေ့စဉ်မပြတ်ကြုံနေခဲ့ရပြီး ကြားသိနေခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူအပေါင်းကလဲ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့လှူဒါန်းမှုတွေကို ငွေကြေးအားဖြင့်၊ စားနပ် ရိက္ခာပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်
တတပ်တအားနဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြတာလဲ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖွယ်ရာသိရှိမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ တစ်ဖက်မှာတော့ အခုရေကြီးဒုက္ခဆိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့
မွန်ပြည်နယ်နဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းဆိုသော်လည်း စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကို မူလဈေးထက် ၃ ဆ အထိ ဈေးတင်ရာင်းနေကြတယ်လို့ပါ စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာကြားသိနေရပါတယ်။
သာမာန် ထမင်းတစ်ထုတ်ကိုတောင် ၂၀၀၀ ပေးဝယ်ကြရတယ်လို့ ပြည်သူတစ်ယောက်က ပြောပြထားပြီး ရင်နာနာနဲ့ပဲ အဲ့ဒီလို လောဘကြီးပြီးအမြတ်ထုတ်တတ်တဲ့
စီးပွားရေးဆန်ဆန် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာလုပ်ရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာ သဘာဝဒုက္ခဘေးတွေ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အခုလိုရင်ဖွင့်တင်ပြထားလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။ အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေအပေါ်
လုပ်ရက်ကြလွန်းတဲ့သူတွေအားလုံး ဒီလုပ်ရပ်တွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအပေါင်း အမြန်ဆုံးဘေးကင်းစိတ်ချလုံခြုံကြပါစေလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
“ဂျပန်မှာ ဆူနာမီဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ နိုင်ငံသားအချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ စတိုးဆိုင်တွေဟာ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အလကားယူဖို့ ခွင့်ပြုကြတယ် ”
“အင်ဒိုနီးရှားမှာ မီးတောင်ပေါက်ခဲ့တယ်။ နေအိမ်အဆောက်အုံပျက်စီးသွားတဲ့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းဆိုင်တွေဟာ တန်ဖိုးရဲ့ ၂၅% နဲ့ဈေးလျော့ ရောင်းပေးကြတယ်”
“အမေရိကန်မှာ မုန်တိုင်းတွေအကြီးအကျယ်တိုက်ခဲ့တယ်။ သူတို့ နိုင်ငံသားအချင်းချင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ ဈေးဆိုင်တွေဟာ အလကားယူဖို့ ခွင့်ပြုပေးတယ်”
”ဟေတီနိုင်ငံမှာ ငလျှင်ဘေးဖြစ်ခဲ့တုန်းက ငလျှင်ဖြစ်ခဲ့တယ့်ဒေသတွင်း ရှိတဲ့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေဟာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဝင်ငွေရဲ့ ၁၀% အောက်တန်ဖိုးနဲ့ ဝိုင်းဝန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာပါဝင်ကြတယ်”
မြန်မာမှာ အခု မွန်၊ တနင်္သာရီ ရေကြီးနေတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းဆိုသော်လည်း ဒေသတွင်းစားသောက်ကုန်တွေရဲ့တန်ဖိုးကို ၃ ဆ အထိမြင့်ရောင်းနေကြတယ်တဲ့။ (သာမာန် ထမင်းတစ်ထုတ်ကိုတောင် ၂၀၀၀ ပေးဝယ်ကြရတယ်တဲ့လေ) ။
“အဲ့လိုလုပ်နေတာလေးတွေရပ်ပေးကြပါ” “သြော်…. ဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲလေ” “စိတ်မကောင်းဘူး” “တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလှူပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ”
မွနျမာပွညျရဲ့ တနသာင်ျရီတိုငျးနဲ့ မှနျပွညျနယျမှာ နှဈပေါငျး ၆၀ ကြျောအတှငျး အဆိုးရှားဆုံး ရကွေီး၊ရလြှေံ၊ ရမွေုပျတဲ့ဒဏျကိုခံစားနရေပွီး ရေးမွို့မှာဆိုရငျ မွို့ရဲ့ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးကနေ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးအထိဟာ
ရအေောကျရောကျလုနီးပါးဖွဈနပွေီလို့ နစေ့ဉျလို သတငျးတှကွေားသိနရေတာဟာ အငျမတနျဝမျးနညျးစိတျထိဖှယျရာကောငျးလှပါတယျ။ ရကျပေါငျးဆကျတိုကျ မိုးကွီးသညျးထနျခဲပွီးတဲ့နောကျမှာ
အခုလိုအဖွဈဆိုးမြိုးကို မွနျမာပွညျသူတှေ ကွုံတှခေံ့စားခဲ့ရတာဖွဈပွီး အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျတှသေကွေပေကျြစီးနဆေဲဖွဈသလို အခုခြိနျထိ ဒုက်ခတောထဲကမလှတျနိုငျကွသေးပါဘူး။
ဒါဟာ ရငျနာစရာသိပျကောငျးတဲ့မွငျကှငျးတှကေို နစေ့ဉျမပွတျကွုံနခေဲ့ရပွီး ကွားသိနခေဲ့ရတဲ့ ပွညျသူအပေါငျးကလဲ ကယျဆယျရေးနဲ့လှူဒါနျးမှုတှကေို ငှကွေေးအားဖွငျ့၊ စားနပျ ရိက်ခာပို့ဆောငျခွငျးအားဖွငျ့
တတပျတအားနဲ့ ရဘေေးသငျ့ပွညျသူတှကေို ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးနကွေတာလဲ ဝမျးမွောကျဝမျးသာဖှယျရာသိရှိမွငျတှခေဲ့ရတာပါ။ တဈဖကျမှာတော့ အခုရကွေီးဒုက်ခဆိုးကွုံတှနေ့ရေတဲ့
မှနျပွညျနယျနဲ့ တနင်ျသာရီတိုငျးတှမှော ကိုယျ့နိုငျငံသားအခငျြးခငျြးဆိုသျောလညျး စားသောကျကုနျစြေးနှုနျးတှကေို မူလစြေးထကျ ၃ ဆ အထိ စြေးတငျရာငျးနကွေတယျလို့ပါ စိတျမကောငျးဖှယျရာကွားသိနရေပါတယျ။
သာမာနျ ထမငျးတဈထုတျကိုတောငျ ၂၀၀၀ ပေးဝယျကွရတယျလို့ ပွညျသူတဈယောကျက ပွောပွထားပွီး ရငျနာနာနဲ့ပဲ အဲ့ဒီလို လောဘကွီးပွီးအမွတျထုတျတတျတဲ့
စီးပှားရေးဆနျဆနျ စိတျပကျြဖှယျရာလုပျရပျတှကေို နျိုငျငံတကာ သဘာဝဒုက်ခဘေးတှေ နဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး အခုလိုရငျဖှငျ့တငျပွထားလို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါရစေ။ အကွီးအကယျြဒုက်ခရောကျရှိနတေဲ့ ဒုက်ခသညျပွညျသူတှအေပျေါ
လုပျရကျကွလှနျးတဲ့သူတှအေားလုံး ဒီလုပျရပျတှကေိုရပျတနျ့ပေးဖို့လိုပါတယျ။ မွနျမာပွညျသူတှရေဲ့ဘဝအပေါငျး အမွနျဆုံးဘေးကငျးစိတျခလြုံခွုံကွပါစလေို့ လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ ဆုတောငျးနမေိပါတယျ။
“ဂပြနျမှာ ဆူနာမီဖွဈခဲ့တယျ။ သူတို့ နိုငျငံသားအခငျြးခငျြးဆိုတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ စတိုးဆိုငျတှဟော ကုနျပစ်စညျးတှကေို အလကားယူဖို့ ခှငျ့ပွုကွတယျ ”
“အငျဒိုနီးရှားမှာ မီးတောငျပေါကျခဲ့တယျ။ နအေိမျအဆောကျအုံပကျြစီးသှားတဲ့ သူတို့နိုငျငံသားတှအေတှကျ ဆောကျလုပျရေးသုံးပစ်စညျးဆိုငျတှဟော တနျဖိုးရဲ့ ၂၅% နဲ့စြေးလြော့ ရောငျးပေးကွတယျ”
“အမရေိကနျမှာ မုနျတိုငျးတှအေကွီးအကယျြတိုကျခဲ့တယျ။ သူတို့ နိုငျငံသားအခငျြးခငျြးစိတျဓာတျနဲ့ စြေးဆိုငျတှဟော အလကားယူဖို့ ခှငျ့ပွုပေးတယျ”
”ဟတေီနိုငျငံမှာ ငလြှငျဘေးဖွဈခဲ့တုနျးက ငလြှငျဖွဈခဲ့တယျ့ဒသေတှငျး ရှိတဲ့ သူတို့နိုငျငံသားတှဟော ပွနျလညျထူထောငျရေးအတှကျ ဝငျငှရေဲ့ ၁၀% အောကျတနျဖိုးနဲ့ ဝိုငျးဝနျးပွနျလညျထူထောငျရေးမှာပါဝငျကွတယျ”
မွနျမာမှာ အခု မှနျ၊ တနင်ျသာရီ ရကွေီးနတေယျ။ ကိုယျ့နိုငျငံသားအခငျြးခငျြးဆိုသျောလညျး ဒသေတှငျးစားသောကျကုနျတှရေဲ့တနျဖိုးကို ၃ ဆ အထိမွငျ့ရောငျးနကွေတယျတဲ့။ (သာမာနျ ထမငျးတဈထုတျကိုတောငျ ၂၀၀၀ ပေးဝယျကွရတယျတဲ့လေ) ။
“အဲ့လိုလုပျနတောလေးတှရေပျပေးကွပါ” “သွျော…. ဘယျလိုပွောရပါ့မလဲလေ” “စိတျမကောငျးဘူး” “တကျနိုငျတဲ့ဘကျကလှူပေးနတေဲ့သူတှအေားလုံးကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ”